Warshada Coin ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | Kingtai
Qadaadiicdayada 'Souvenir' waa qurux aan caadi ahayn oo qiimo leh, taas oo noqon karta xusuus naxdin leh oo laga helo safarada, sumad laga garan karo shirkaddaada, ururkaaga ama naadigaaga, ama abaalmarin la hubo.
Kuweena Qadaadiicda Souvenir waa qurux aan caadi ahayn oo qiimo leh, taas oo noqon karta xusuus aad u xun safarada, calaamadda la aqoonsan karo ee shirkaddaada, ururkaaga ama naadigaaga, ama abaalmarin la hubo.
Isticmaalka ugu Fiican
Olacagta birta ah ee lagu xasuusto waa lama huraan ololeyaasha lagu dhiirrigelinayo goobtaada iyo soo jiidashada ugu xiisaha badan iyo waxyaalaha qarsoon. Marka la gaaro koox dad ah, waxay u adeegi karaan qaab wax ku ool ah oo xayeysiis ah oo ku wajahan bulshada iyo dhaqanka maxalliga ah. Iyagu sidoo kale waxay rabaan ururiyayaashu inay noqdaan bandhigyo tirooyin leh.
Fursadaha kordhinta dheeraadka ah waxaa sidoo kale ka mid noqon kara ku darista wax fiican jilicsan dhaldhalaalka, warqad ku dhejisan, daabacaadda dhijitaalka ah, ranjiyeynta iyo epoxy.
Sidee Loo Sameeyay
Waxaan ka sameysannaa lacagta birta ah, astaamaha laga helo: birta, naxaas, Alloys, 24k dahab dahaadhay bimetallic.
Waxay ku dhufteen dhammaadka caddaynta, taas oo kor u qaadeysa bilicsanaanta sheyga iyo soo jiidashada. Xudduudku wuxuu noqon karaa mid jilicsan ama jilicsan.
Waxaan sidoo kale qabannaa shaqooyin kale si aan u sifeyno una qurxinno billadaha. Ujeedadaas awgeed, waxaan ku xiraynaa oksaydh ama habeyn si aan uga dhigno kuwo da 'weyn.
Waqtiga wax soo saarka: 10-15 maalmaha shaqada kadib ansixinta farshaxanka.
Xiga: 2D calaamadda pin